Waa maxay sababta aad WiFi Nooga dhigtay iyo Sida loo Xaqiijiyo
Waa maxay sababta WiFi Sucks
Jaantusyada iyo Iskuduwaha
Ku dhowaad Wifi Sucks shabakadaha guryaha. Dhammaanteen waxaan ku adkaysanay dilalka saboolka ah ee guriga WiFi iyo isbeddelka ku-meel-gaadhka ah, khalkhalka, iyo dib-u-hagaajinta ku-meel-gaadhka ah ee ka muuqda wax yar oo ka badan kuwa ka soo horjeeda. Haddii aad tahay qof xirfadle ah oo diyaarsan, raadinaya hab u sharaxaya qoyska iyo saaxiibada asxaabta ah sababta ay ugu qasbeen in ay ku duubaan agagaarkooda adeegga soo-dhoweynta ee aan shaqayn karin - maxaase noqon doona?
Fursada aanad aqoon u lahayn IT-da oo raadineysa habab si aad u hesho waayo-aragnimo xooggan oo isku-dhafan nidaamka WiFi, boostadani waa aasaas wax ku ool ah oo ku saabsan abaabulka WiFi iyo buug-gacmeed si loogu isticmaalo gurigaaga sida shaybaar lagu barto si aad u isticmaasho maalin kasta sida farsamada IT.
WiFi si aad u dabiiciyan waa mid ka sii daran sidii loo xirxiray oo ku saabsan tayada qalafsan iyo awoodda signalka. Calaamadaha isku dhejinaya dhexdhexaad ah sida wire ayaa leh hab macquul ah. Calaamadaha wireless waxay isku marjin karaan isku-kalsooni waxayna luminayaan awoodooda fogaanshaha ay ka helaan faraca faafidda. WiFi waa ku xiran tahay ganacsi, laakiin waa dad aad u tiro badan oo diyaar u ah inay sameeyaan - ma jiraan meel ka mid ah ururada ethernet ee qaybta weyn ee qalabyada guriga-isticmaalka. Sidaa daraadeed waxaanu bixinaynaa xoogga miisaankeena ee busteada isbeddelka ah ee baaxadda ah ee macno ahaan asal ahaan ka soo baxa gudaha ether. Dhamaanteen waan sii wanaajin karnaa godadka bustaha, taas oo ka dhigeysa xitaa culays adag oo adag oo urur ah oo daboolaya gurigaaga oo dhan.
Furayaasha ayaa kormeeraya taraafikada webka. Waxaad ka qaadan kartaa wax badan oo ku saabsan awooddooda iyo qayb ka mid ah Keith waayo-aragnimada ugu horraysa ee la xidhiidha furayaasha iyo bedelaada. Xaalad walbaba, furayaasha waxaa amaahda ISPs waa caadi ahaan 2-in-1. Waxay labadaba kormeeraan taraafikada waxayna gudbinayaan signalada raadiyaha oo qaabeeya xiriiriyahaaga wireless. Taasi waa waxa ku saabsan fiilooyinka soo-galaya ee kuugu wareegaya adiga oo laga yaabo in lagaa rabo inaad ku tilmaamto meesha ay ku taal gurigaaga, laakiin calaamadaha calaamadaha calaamadaha ayaa loogu talagalay in ay noqdaan kuwo hufan oo ku xirxiraan geesaha 90. Markaa hubi inay dhammaantood tilmaameen kooras la mid ah, midba midka kale ama midba midka kale.
Inkastoo xajmiga qalabka aqbaartu uu kobcin karo xajmiga, weli waxay u badan tahay inaanay daboolin gurigaaga oo dhan. Maaddaama kuwan 2-in-1 ay sameeynayaan laba shaqaalood oo labanlaab ah, waxaana jira hal ka mid ah, waxay caadi ahaan ka yar yihiin kuwa qalabka loo yaqaan "WiFi Access Points" (WAP).
Beddelka wareega iyo gadashada WiFi si joogto ah ayaa isku dayaa in ay sameeyaan xad-dhaaf iyo dagaalo si ay u siiyaan baaxad dhan guri. Halkii, baakad ka mid ah WAP-yada laga soo iibsado iibiyeyaasha isku midka ah ayaa wada hadli doona, waxayna siin doonaan xayawaan dheeri ah gurigaaga.
Xasuuso in qalabyadani ay weli yihiin calaamad wax soosaar leh oo guud ahaan sarreeya, ma ahan mid taagan. Marka aad haysatid guri aad uwadid ah waxaad u baahan doontaa wax ka yar hal WAP dabaq kasta.
WiFi-awood leh iyo kuwa WiFi-ga soo saaraya waxay ku xiriiri karaan iyadoo loo eegayo xaqiiqda ah inay isticmaalaan heer la mid ah oo xiriir la leh: heerka 802.11, oo qeexaya sida qalabku ula xiriiri karo macluumaadka iskudubarida wadooyinka kala duwan.
Marka la eego heerka 802.11, waxaa jira habab kala duwan oo loo adeegsan karo si ay ula xiriiraan, kuwaas oo dhammaantood aan la aqoonsan, taas oo macnaheedu yahay inaan la xakameynin oo aadan u baahnayn in lagu dhibo ogolaansho aan caadi aheyn oo iyaga la xiriirta. Waxay u badan yihiin qaybta waraaqaha gaaban, markaa iskudhacyada calaamadaha muuqda ma dhicin - adigu ma xiriiri doontid dib-u-dhicin dib-u-dhicin ah oo ka imanaya subaxa xaafaddaada. Si kastaba ha noqotee, tiro badan oo ka mid ah kanaalada ayaa u dhow midba midka kale, waana wax caadi u ah warbaahinta WiFi ee laga helo guryaha deriska ah, ama xitaa qalabka guryaha ee la midka ah, si ay u noqoto kan daboolaya.
Waxaad kala dooran kartaa inta u dhexeeysa qalabka gadashada 5GHz ama 2.4 GHz. Qeybaha ugu ballaadhan waa 2.4 iyo kanaladahaas oo ka mid ah kuwa ku filan si aad uga fog midba midka kale si aysan u dhexgalin waa 1, 6, iyo 11. Kuwani waa go'aamada caadiga ah ee caadiga ah, iyo haddii ay dhacdo inaad soo qaadato waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaadan daboolin deriskaaga.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo in aad leedahay WAPs ama aad ku bedeshay channel kan la mid ah, iyada oo aan loo eegin suurtagalnimada in mid ka mid ah saddexda kor ku xusan, waxay dhexgalayaan oo ay sii wadi doonaan WiFi-gaaga. Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad u guurto 5GHz marka la eego xaqiiqda ah in inkastoo xaqiiqda ah in signalku leeyahay mid gaaban, taas oo runtii faa'iido u ah sababtoo ah waxaa laga yaabaa in ay jiri doonto waddo cad.